Voaroba ny vola 50 tapitrisa Ar: nirongo basy kalachnikov ireo nanafika « grossiste » teny Anosibe | NewsMada
Voaroba ny vola 50 tapitrisa Ar: nirongo basy kalachnikov ireo nanafika « grossiste » teny Anosibe
Nitrangana fanafihana mitam-piadiana teny Anosibe, ny asabotsy lasa teo, tamin’ny 3 ora sy sasany. Araka ny filazan’ny zandary, efa-dahy ireo jiolahy nanao ny fanafihana ary nitondra Kalachnikov. Tranombarotra mpamongady ireo kojakojana ilaina andavanandro ity nisy nanafika ity. Voaroba tamin’izany ny vola mitentina 50 tapitrisa Ar. Niala mora foana teny an-toerana ireo jiolahy niaraka tamin’ny basy nirangaranga. Noheverin’ny manodidina ho mpitandro filaminana ny fahitana ny fihetsiny. Efa niantso vonjy ireo voatafika vao taitra ny manodidina.
Nampandrenesina ny mpitandro filaminana manoloana izany. Nandray an-tanana ny fanadihadiana ny zandary avy eny amin’ny borigady Tana-Ville. Olona iray izay ahina ho mifandray tendro amin’ity fanafihana ity no nosamborina. Mandeha ny fanadihadiana lalina io olona io, amin’izao fotoana izao.
Mirongatra mandritra ny fety
Fotoana mampirongatra ny asan-jiolahy izao vanim-potoanan’ny fety izao. Santionany ity teny Anosibe ity, fa ahenoana fitarainana hatrany tonga eny amin’ny mpitandro filaminana eny, indrindra amin’ireo faritra manodidina ny renivohitra.
Anisan’ny mampihoroho ny olona tanteraka ny fananan’ny jiolahy basy, izay efa tena mahery vaika tokoa. Eo ihany koa ny fahaiza-manaon’ireo jiolahy. Mahatonga ny rehetra mihevitra fa mpitandro filaminana ihany ireo manao asan-jiolahy ireo. Efa nisy ihany ny tratra maromaro, toy ny tany Toamasina tafiditra amin’ny raharaha kidnapping. Toy izany koa ireo nanao herisetra teny Antanimena. Karazana olona toy inona no lasa mpitandro filaminana ka lasa manao asa ratsy avy eo?